Iyi Nhungamiro Inotsanangurwa inotsanangura kuti mashoko ako ega ega akaunganidzwa sei, anoshandiswa, uye akagoverwa paunoshanyira kana kutenga kutenga kubva egay.shop ("Site").
Mashoko Edu Wega Tatinounganidza
Paunoshanyira Site, tinongotora zvimwe ruzivo pamusoro pekushandisa kwako, kusanganisira ruzivo pamusoro pewebhu web browser, IP address, nguva yemaawa, uye mamwe makiki akaiswa pafoni yako. Uyezve, sezvo iwe uchitsvaga paIndaneti, tinounganidza ruzivo pamusoro pemapuraneti ega ega kana mazvigadzirwa zvaunofunga, zvipi mawebsite kana mazwi ekutsvaga akakuratidza iwe kuSiti, uye ruzivo pamusoro pekuti iwe unoshanda sei neSite. Isu tinotarisa kune izvi zvakangotorwa-zvakagadzirirwa mashoko se "Dhizivo Dhizha".
Tinounganidza Mashoko eDhidhiyo tichishandisa inyanzvi:
- "Cookies" ndeye mafaira emafaira akaiswa pachigadzirwa chako kana kombiyuta uye kazhinji anosanganisira anonymous anonymous identifier. Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pekiki, uye kuti unovhara seikeki, enda http://www.allaboutcookies.org.
- "Mifananidzo yepaIndaneti" zviito zvekuona zvinoitika paIndaneti, uye kuunganidza deta kusanganisira IP address, browser yako, internet service provider, kureva / kubuda mapeji, uye matanho ezuva / nguva.
- "Web beacons", "tags", uye "pixels" ndeye mafaira emagetsi anoshandiswa kunyora mashoko pamusoro pekuti iwe unotarisa sei Site.
Kuwedzerwa paunenge uchitenga kana kuedza kutenga kuburikidza neSeti, tinowana mamwe mashoko kubva kwauri, kusanganisira zita rako, kero yekubhadhara, kero yekutumira, ruzivo rwekubhadhara (kusanganisira nhamba dzekadhi rechikwereti), kero ye email, uye nhamba yefoni. Isu tinotaura nezvemashoko aya se "Mutemo Wenyaya".
Apo patinotaura pamusoro pe "Mazano Evanhu Pamwe" muNyaya yeMutemo, tiri kutaurirana zvose pamusoro peDhezi Ruzivo neRudzi Rukuru.
Tinoshandisa Sei Nhoroondo Yenyu Yako?
Tinoshandisa Hurongwa Hwemashoko yatinounganidza kakawanda kuti tizadzise chero mirairo inowanikwa kuburikidza neSeti (kusanganisira kushandura mashoko ako okubhadhara, kuronga kutumira, uye kukupa mavovo uye / kana zvigwaro zvekuita). Kuwedzerwa, tinoshandisa iyi Rudzi rweNhepfenyuro kune:
- Kurukura newe;
- Cherechedza mirairo yedu yezvingangova nengozi kana unyengeri; and
- Kana uchienderana nezvinodiwa iwe wagoverana nesu, tinokupa ruzivo kana kutengeserana kunosanganisira zvigadzirwa kana mabasa edu.
Tinoshandisa Izwi Remunhare yatinounganidza kutibatsira kutarisa kwehuwandu hwemangwana nekunyengedza (kunyanya, IP address yako), uye zvizhinji zvinowanzovandudza nekugadzirisa nzvimbo yedu (somuenzaniso, kuburikidza nekugadzira analytics pamusoro pekuti vatengi vedu vanoongorora uye vanobatana sei iyo Site, uye kuongorora kubudirira kwekutengesa kwedu uye kushambadzira kwemashoko).
Kugoverana Nayo Mashoko Akwo Oga
Isu tinogovera Zvido zvako zveMunhu wega wega kuitira kuti tibatsire kushandisa Ruzivo Rwako, sezvarondedzerwa pamusoro apa. Somuenzaniso, tinoshandisa Shopify kuti tive nesimba redu rekutsvaga muIndaneti - unogona kuverenga zvakawanda pamusoro pekuti Shopify inoshandisa sei Mashoko ako ega pano: https://www.shopify.com/legal/privacy. Isu tinoshandisa Google Analytics kutibatsira kuti tinzwisise kuti vatengi vedu vanoshandisa sei Site - unogona kuverenga zvakawanda pamusoro pekuti Google inoshandisa sei Zita rako pachako pano: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Unogonawo kusarudza kubva kuGoogle Analytics pano: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Pakupedzisira, tinogonawo kugovera Ruzivo Rwako pachako kuti titevedze mitemo inoshandiswa nemirairo, kupindura kune subpoena, kutsvaga mvumo kana chimwe chikumbiro chepamutemo chemashoko atinowana, kana kuti kudzivirira dzimwe kodzero dzedu.
Kuita Zvido zvekuita
Sezvinorondedzerwa pamusoro apa, tinoshandisa Ruzivo Rweuga kuti tikupe zviziviso zvinotarirwa kana kutengeserana kwekutengesa isu tinotenda kungave kunofadza iwe. Kuti uwane mamwe ruzivo pamusoro pekutsvaga kwekutsvaga kushambadzira, unogona kushanyira pepa rekudhiridzira re Network Network Initiative ("NAI") pa http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.
Iwe unogona kusarudza kubva pane zvinotarirwa zvinoshandiswa uchishandisa mazano pasi apa:
Uyezve, unogona kusarudza zvimwe zvemashumiro aya nekushanyira Dhipatimendi rekudhiridzira rekudhiridzira yeD Digital Advertising Alliance pane: http://optout.aboutads.info/.
Ndapota cherechedza kuti hatishanduki kukosha kweDein data uye kushandisa maitiro apo tinoona Do Not Track dhizha kubva kune browser yako.
Kana iwe uri muEurope, iwe une kodzero yekuwana ruzivo rwemunhu wega isu tine hutano pamusoro pako uye kukumbira kuti ruzivo rako pachako rururamiswe, ruchivandudzwa, kana kubviswa. Kana uchida kushandisa kodzero iyi, tapota taura nesu kuburikidza nemashoko ekubatana pasi apa.
Uyezve, kana iwe uri muEurope mutinhi wekucherechedza kuti tirikugadzirisa ruzivo rwako kuitira kuti tiite zvibvumirano zvatinogona kuva nazvo (somuenzaniso kana iwe ukaronga kuburikidza neSiti), kana kuti zvimwe kuti uite zvido zvebhizimisi zvakanyorwa pamusoro apa. Uyezve, tapota ona kuti ruzivo rwako ruchaendeswa kunze kweEurope, kusanganisira kuCanada neUnited States.
Kana iwe ukaisa urongwa kuburikidza neSiteti, tichachengetedza Rondedzero Yenyu kune zvinyorwa zvedu kunze kwekuti iwe ukatikumbira kuti tibvise ruzivo urwu.
Isu tinokwanisa kudzokorora iyi purogiramu yehupombwe nguva nenguva kuitira kuti tifunge, somuenzaniso, kuchinja kune zvatinoita kana zvimwe zvekushanda, zvikonzero zvepamutemo kana zvekutonga.
Kuti uwane mamwe ruzivo pamusoro pemitemo yedu yega yega, kana une mibvunzo, kana iwe uchida kunyunyuta, tapota taura nesu nekudhonza HERE.